तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ६ - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ६
मलाई सबैजनासंग दिक्क लाग्छ । कसैले पनि मलाई बुझ्दैन जस्तो लाग्छ । केही काम पनि गर्न मन लाग्दैन, म के गरूँ ?
मानिसका सबैका आ-आफ्ना दु:ख / तनाव हुन्छन्। तपाईंको आमा तपाईंको भविष्य बारे, घरको व्यवस्थापन बारे चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईंको बुवा आर्थिक पाटोलाई लिएर तनावमा हुनुहुन्छ। तपाईंको दाजु कमाइलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ होला, दिदी जागिरको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ होला अनि तपाईंको साथी करियर वा प्रेम सम्बन्धको बारेमा । हा
मीले एकले अर्काको तनाव बारे बुझ्ने कोसिस गर्दैनौ, एकले अर्कासंग तनाव बाँड़दैनौं र एक्लो महसुस गर्छौं। आफ्नो तनाव अरुले बुझुन् भन्ने सोंच्नुभन्दा अगाडी तपाईंका अभिभावकको तनाव बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने, तपाईं आफैलाई नै तपाईंको तनाव सानो लाग्न थाल्छ ।
फेरी, अनपेक्षित समस्या र समाधानको खेल नै जीवन हो । त्यसैले आफूलाई तनाव दिइरहेको समस्याको समाधान खोज्न थाल्नुहोस् । समस्याले खाइरहेको छ र आफ्नो परिवारसंग बताउन सक्नुहुन्न भने साथीलाई बताउनुहोस्। यदि केही गरे पनि तनावबाट निस्कन सक्नुभएन भने, मनोवैज्ञानिकसंग भेटेर परामर्श लिनुहोस् ।
तनावबाट मुक्त बन्नको लागि अरु टिप्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Previousरोनाल्डोले जिते बालोन डे ओर अवार्ड !
Nextनिस्केका शब्दहरु, फर्कन्नन्